रिलेसनसिप « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
तपाईंको लोग्ने कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ ? एकपटक यो सामाग्री हेर्नुस् त
जनस्वास्थ्य सरोकार । हरेक ब्यक्तिमा हुने आफ्नै स्वभावका कारण ऊ अरुभन्दा फरक किसिमको हुन्छ । पतिहरु भिन्न भिन्न स्वभावका हुने गर्छन् । कतिको आफ्नै किसिमको स्वभाव हुने गर्छ । हामीले
स्वस्थ यौन जीवनको राज
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । यौनक्रियालाई वैवाहिक जीवनको एक आधार मात्र मानिंदैन, यसले हाम्रो स्वास्थ्य ठीक राख्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । पटकपटक यौनक्रिया गर्नाले पुरुषको प्रजनन क्षमता
यौनसम्पर्क गर्न खोज्दा किन लिङ्ग उत्तेजित हुँदैन ? कुन हर्मोनले गर्दा यस्तो हुन्छ ?
यौन समस्या महिला र पुरुषको फरक फरक हुने गर्दछ । विशेषगरी पुरुषहरुलाई लिङ्ग उत्तेजना नहुने, यौन इच्छामा कमी, र शीघ्रस्खलन हुने र महिलाहरुलाई यौन इच्छामा कमी र यौन क्रिडा गर्दा
आरामदायी जीवनका लागि ५ टिप्स
भनिन्छ, सफल हुनु भनेको आफ्नो जीवनका हरेक कथाहरूको सन्तुलन मिलाउनु हो । सफलता र खुसी परिवार पर्यायवाचीजस्तै हुन् । यदि कसैले परिवार नै मिलाउन सक्तैन भने उसले व्यवसायसमेत राम्ररी गर्न
यौनसम्पर्क गर्नेवित्तिकै किन लाग्छ पुरुषलाई निन्द्रा ?
महिला र पुरुषबीच यौनसम्पर्क भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ । यौनसम्बन्ध राख्नेवित्तिकै महिलालाई अंगालो नहाली वा कुराकानी नगरी निदाउने पुरुषप्रति
श्रीमतीको यस्तो गुणले बन्छन श्रीमान भाग्यमानी
धर्मशास्त्रअनुरुप श्रीमतीलाई अर्धांगिनी मानिन्छ । शास्त्रले भन्छ– असल श्रीमती भएको घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ । श्रीमती खराब परिन भने घरबार टाट हुन्छ । गुणहरु मीठो बोली धर्मशास्त्र अनुसार, महिलामा हुनुपर्ने
अचानक यौन सम्पर्क गर्दा किन हुन्छ युवतीलाई पश्चाताप ?
अचानक कसैसँग यौन सम्पर्क भयो भने त्यसलाई क्याजुअल सेक्स भनिन्छ । यस्तो यौन सम्पर्कमा सहमति र खुशी पनि हुन्छ । क्याजुअल सेक्सपछि युवतीहरुमा खेद, पश्चाताप र हिनतावोधको भावना देखिन्छ ।
के सेक्स शारीरिक कसरत हो ? थाहा पाउनुहोस्
हाम्रो समाजमा अझैपनि सेक्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सकिदैन् । तर, सत्य के हो भने नियमित सेक्स स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । सेक्सले ब्लड प्रेसर कम गर्छ र
यौन आकर्षण घटाउने शत्रु चिज, तथ्यले के भन्छ ?
सेक्स रिसेशन अर्थात शरीरिक सम्बन्ध राख्न मन नलाग्ने । हुन त उमेर बढ्दै जाँदा सेक्स प्रति रुचि घट्दै जानु स्वभाविक हो । तर कम उमेरमा यस्तो समस्या देखापर्नु सेक्स रिसेशनको
पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो? यसबारे किशोरावस्थामा संसारभरि सबैमा उत्सुकता र अन्योल छ। नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौनसम्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन। पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध